Asamoah Gyan oo loo doortay cayaarayahanka Africa, 2010 - BBC Somali
Asamoah Gyan oo loo doortay cayaarayahanka Africa, 2010
Image caption Asamoah Gyan iyo tababaraha kooxda Sunderland markii la guddoonsiiyay abaalmarinta
Cayaaryahanka kooxda Sunderland ee England iyo kooxda qaranka kubadda cagta dalka Ghana, Asamoah Gyan ayaa loo doortay cayaarayahanka Africa, 2010. Waa abaalmarin ay sanad walba bixiso BBC oo dhagaystayaashu ay u codeeyaan.
Wuxuu helay codadka ugu badan ee dhagaystayaashu ay soo dhiibteen. iyadoo ay kula tartamayeen dhowr cayaartooy ookale, ayaa Asamoah Gyan uu helay codadkii ugu tirada badnaa.
Waxaa uu si wayn uga horeeyay Cayaaryahanada kale ee Andre 'Dede' Ayew, oo ay isku dal yihiin, Yaya Toure iyo Didier Drogba oo Ivory Coast u dhashay iyo cayaarahanka Samuel Eto ee dalka Cameroon u cayaara.
Wuxuu sheegay Asamoh in uu ku faraxsan yahay in loo aqoonsado cayaaryahanka sanadka 2010 ee qaaradda Africa, uuna ku guulaysto abaalmarinta oo ay bixiso BBC, wuxuuse sheegay in uusan rumaysan karin. wuxuu u mahadceliyay dhamaan taageerayaashiisa.
Wuxuu sheegay in ay aad u adkayd in lagu guulaysto abaalmarinta, gaar ahaan iyadoo cayaartoyd culus ay tartanka kula jireen.
Asamoah Gyan, kooxdiisa dalka Ghana wuxuu gaarsiiyay kaalinta labaad ee cayaaraha Africa ee ka dhacayay Angola, wuxuu dhaliyay sadex ka mid ah afar gool oo kooxdu ay ku gaartay cayaarta final-ka muddo sideed iyo toban sano ah.
Cayaarihii adduunku kooxdiisu waxay ku soo hartay wareegga sideeda koox, fursadii ay ugu gudbi lahaayeen semifinal ayaa rigoore loo dhigay Ghana uu ka qasaariyay, balse waxaa lagu xusuustaa tartamadii ka horeeyay iyo goolashii uu kooxda u dhaliyay ee ay ku soo gaartay heerka ay joogtay.
Wuxuu hadda u cayaara kooxda Sunderland oo ku soo iibsaday ilaa 13 million oo giniga istarliinka ah, kaasoo ah lacagtii ugu badnayd ee Sunderland ay cayaartoy ku soo iibsato. Waxaa uu ka soo tagay kooxda Rennes ee dalka Faransiiska.